သွားချက် .ပြီးတော့စားကြတာကိုဆိုလိုချင်တာပါ။ အဲဒီ့ညမှာမှ.လမင်းကြီးကလည်း.ထိန်ထိန်သာ.
အလင်းပေးနေပြန်တော့အားလုံးအကြိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညရောက်ရင်.ဤလို.ဤလို ပြုရတယ်ဆိုတာ.ဘယ်ကလာပြီးဘယ်သူသင်ပေးလိုက်တယ်မသိဘူးနော်။ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ပါ..း)။
သမီးစံတို့များဆို..ငယ်ငယ်က အားကြီးဆိုးတာနော် (ခုလည်းမလိမ္မာပါဘူး)၊ ဒီလို. (တစ်နှစ်မှတစ်ခါ) ကြုံတောင်ကြုံခဲ တန်ဆောင်မုန်းညလေးဆို. ကိုယ့်ဇာတိကမနေတော့ဘူးလေ။ အရေးယူမယ့် သူလည်း မရှိပြန်တော့.အားရပါးရကဲ ကြတာပေါ့။
ဒီလိုနေ့မျိုးဆို..မနက်ပိုင်းမှာ.ရှိသမျှအလှူလိုက်စား။ပြီးတော့ညနေမှအိမ်ပြန်၊ညကျတော့လျှောက်ခိုး.အဲလေ.လျှောက်ဆော့ကြပါတယ် ။ဆော့ဖို့လူကတော့..လိုက်ပြီး.တစ်ယောက်ချင်းစုစရာတောင်မလိုဘူး.ကိုယ့်အိမ်တစ်အိမ်တည်းနဲ့ တင်ပြည့်နေတာ။ဒီနေ့ညအတွက်.ဘယ်လို.ဘယ်ပုံ.လှုပ်ရှားကြမယ်။ဘယ်သူဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ. မနက်ကတည်းကအစီစဉ်ဆွဲထားပြီးသား(အဲလိုတတ်ကြွတာ.သူများမကောင်းကြံဖို့ဆို)။ အရွယ်နည်းနည်းကြီးတဲ့(သမီးစံရဲ့)အစ်ကိုတွေနဲ့.သူ့တို့သူငယ်ချင်းတွေက.(မနက်ကတည်းကချိန်ထားတဲ့ အိမ်က)ကြက်တွေသွားဆွဲ.။ကျန်ခဲ့တဲ့(အမတော်တွေအပါအ၀င်)မိန်းကလေးတွေက.ပါလာတာတွေချက် (ပြီးတော့)တစ်ပျော်တစ်ပါးကြီးစားကြတာ။အတိုင်ဖောက်ကို.ညီလို့နော်း)။
ပြီးတော့.ဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်အရ..သက်ဆိုင်ရာအိမ်တွေ(အိမ်တွေ).စာတွေလိုက်ချိတ်၊လူပျိုကြီးတွေရှိတဲ့ အိမ်တွေဆို.သူတို့သမီးအလိုရှိသည်.စီဗွီဖောင်တင်ပါ၊အပျိုကြီးတွေအိမ်ဆိုလည်း.ဒီအတိုင်းပဲပေါ့ (ဒါကြောင့်ထင်ရဲ့.ခုတော့ဝဠ်လည်နေပြီ)။ပြီးတော့..ရွာတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း.နတ်ကတော်ကရှိသေးတော့ သူတို့အိမ်တွေအတွက် ဤခြံတွင်နဂါးသိုက်ရှိသည်၊ခုနှစ်ရက်အတွင်းပြောင်းပေးပါပေါ့း)။ရွာလူကြီးအိမ်ကျတော့.အလေးသွား.အပေါ့ဖရီး တစ်ယောက်တစ်ရာတဲ့..အဲလိုချစ်ကြတာ..။
ပြီးရင်..ရှိသမျှအိမ်တွေက(ရသမျှ)ပစ္စည်းတွေလိုက်ယူ၊ပြီးတော့ ရွာလယ် လမ်းမကြီးမှာ ပုံထားလိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့.(ရွာမှာရှိတဲ့) အရွက်စိုက်ခင်းတွေကို.. လိုက်နှုတ်.ပြီးတော့. မြောင်းဘေးမှာပဲ ပုံထားလိုက်ကြတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာက.ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားပဲလေး)။
(လေလုံးကတော့ထွားတယ်နော်း)။နို့ပေမယ့်..(ဘလော့ရေးရင်း)ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေတွေရဲ့ အိမ်ကိုမြင်တော့..ဇာတိက.ပြလာပြန်ရောကွယ်း)။တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ်လိုက်ချောင်းကြည့်တော့လည်း. အားလုံးကငြိမ်နေကြလေရဲ့..ရဲဘော်၊ရဲဖက်တွေလိုက်ရှာတော့လည်း..သူတို့သိဘူးတဲ့လေး)။
ဒါနဲ့ပဲ..အင်းမလုပ်.အဲမလုပ်ပဲနဲ့. အေးအေး နေလိုက်ရပါတော့တယ်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 11, 2011 at 2:05 AM
ခုတော့ သမီးစံ လိမ္မာသွားပြီပေါ့လေ... :):)
စကားမစပ် လွမ်းတယ်ကွယ် ..(အမိမြေကိုပါ )
လမင်းငယ် November 11, 2011 at 3:41 AM
စံစံရေ ရွာလေးကိုသတိရလို့ တာ
လမင်းငယ် November 11, 2011 at 3:42 AM
rose November 11, 2011 at 4:11 AM
Your post makes me smile... I love it!
san htun November 11, 2011 at 7:28 AM
ခရီးသွားပို့ စ်တွေ တင်ပါဗျို့ 
Thandar Lwin November 11, 2011 at 7:42 AM
သမီးစံလေး ဘယ်ဘက်တွေ ဘုရားဖူးသွားတာလဲ။
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ဖွယ်..တန်ဆောင်မုန်းပေါင်းများစွာကို.ချစ်ခင်သူများ နဲ့ အတူတူ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ ကွယ် ။
jasmine(တောင်ကြီး) November 11, 2011 at 10:14 AM
အဖြစ်ဆိုးလှချေလားကွယ် - ကိုယ်တို့ဆီလာခဲ့ပါလား
စံစံစာကိုဖတ်ပြီး ဒီတခါ အင်းလေးကိုလွမ်းမိပါရဲ့
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် November 11, 2011 at 10:46 AM
ငါ့ ညီမတော်လေး တော်တော်လိမ္မာလာပြီးပဲ
အင်း ဒါဆို အပျိုလတ်ဘ၀က ကျွတ်ဖို့ အကိုတော် ယောက်ဖတော်ရှာပုံတော်ထွက်တော့မှပဲ
အပျိုကြီးစံ...လက်ပစ်ဗုံးဆိုတာတောင် ပြရုံနဲ့ သိမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး..
အပျိုကြီးတွေကို လူပျိုကြီးဂိုဏ်းက..ပြန်မပေးဆွဲ..အဲ..မှားလို့ပြန်ပေးဆွဲမလို့ တဲ့..ဒါဗြဲးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး..ခင်မင်လေးမစားလျှက်..မောင်..ကိုကိုမောင်...အိုပါး...
အပျိုကြီးရေ ဖြစ်တာလဲ ကြာရောပေါ့ ... အပျိုကြီးကတော့ ... အခုတလော ... ပွဲ များနေပြီနော် ....
ညီရဲ November 11, 2011 at 11:59 AM
သူခိုးကြီးညကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ညလေး တစ်ညပေါ့ ညီမရယ်...
အစ်ကိုတို့ လဲ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် တော်တော်ကို ပျော်ခဲ့ကြတာ...
မြသွေးနီ November 11, 2011 at 3:18 PM
သမီးစံ ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တန်ဆောင်မုန်းကို နှစ်သက်စွာ ဖတ်သွားပါတယ်။ ခရီးသွားဆောင်းပါးလေးတင်ပါဦး..။
လွမ်းပိုင်ရှင် November 11, 2011 at 8:54 PM
ဦးဦးလွင်ပြင်သားသားကို ခေါ်တာလားမသိဘူးနော် ဟိဟိ